दुईतिहाईको ओली सरकारलाई रविले यसरी न्ग्याउँलान भनेर कसले सोचेको थियो र ? तर न्ग्याए (भिडियो) « Swadesh Nepal
दुईतिहाईको ओली सरकारलाई रविले यसरी न्ग्याउँलान भनेर कसले सोचेको थियो र ? तर न्ग्याए (भिडियो)
गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुषाल र लालबाबु पन्डितबारे केहि टिप्पणी।भोट माग्दै सरकारी कर्मचारी !
न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४५९ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विवशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।